Sanduuqa Horumarinta Soomaliland (SDF) iyo Midawga Yurub waxay si wadajir ah u maalgelinayaan mashruuca biyo-ballaadhinta magaalada Hargeysa kaas oo ay fulinayso Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo kaashanaysa hay’adda UNHABITAT.
Qodidda Affar ceel-biyood oo ku qalabaysan bamamka biyaha tuura kuwaas oo laga qoday deegaanka Horahaadley ee Waqooyiga Hargeysa, laguna soo xidhi doono xarunta biyaha ee Geed-deeble. Sidoo kale waxa meel fiican maraysa hawsha dhigidda beebab cusub oo tayo sare leh oo soo qaadaya biyaha soona gaadhsiinaya illaa Hargeysa. Saldhigga biyaha Geed Deeble ayaa isagana kor loo qaadayaa shaqadiisa.
Dhanka kalena waxa la dhamaystiray nidaamka ballaadhinta biyaha ee Xaraf si ay ugu faa’idaystaan barakacayaasha xaafadaha Ayax 1 iyo 2 una helaan biyo jaban. Qaybtan waxa ka faa’idaysanaya ku dhawaad 7,000 oo qof oo ku dhaqan labadaas xaafadood iyo hareerahooda. Waxa la dhigay beebab biyaha kasoo qaadaa deegaanka Xaraf oo usoo gudbiya goobaha biyaha lagu kaydinayo eek u yaallaa xaafadahaas, halkaas oo ay uga soo gudbin doonaan xarumo biyo qaybineed.
Tababarkan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda beeraha ee magaalada hargeisa ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shaqaalaha cusub ee wasaaradda beeraha waxaana lagu tobabarayaa cilmi baadhista dhinaca beeraha iyadoo la gayn doono xarunta cilmi baadhista ee deegaanka aburiin waxana ka qayb qaadanaya 20 qof oo ka mida shaqaalaha wasaaradda beeraha ahna shaqaalaha cusub ee wasaaradda beeraha.
Tobabarkan ayaa waxaa uu bilaabmay horaantii bishii April-2016 waxaana uu dhamaan doona September 2017 waxaa uu socon doona mudo 18 bilood .
Ujeedada tobabarkan ayaa ah sidii isbadal loogu samayn lahaa aqoonta wax beerista iyo wax soosaarka ee beeralayda Somaliland,hadaba si looga midho dhaliyo yoolka wasaaradda beeraha ee ah sidii isbadal loogu samayn lahaa aqoonta beerista iyo wax soo saarka guud ahaan wadanka Somaliland ayaa waxaa shaqaalaha lagu tobabarayaa casharo wax ku kordhinaya wax soo saarka oo ay ka mid yihiin ciida iyo noocyadeeda kala duwan ee carada habka casriga ee wax beerista iyo sida looga ilaaliyo dalaga cayayaanada iyo cudurada .
Lataliyaha maareeyaha mashruuca nafaqaynta ciida iyo biyaha ee wasaaradda beeraha Mr Abdirashid ayaa waxaa uu ka waramay guud ahaan faa,idada ay shaqaalahani ka helayaan mudada tobabrkani socdo iyo sidii ay wax uga badali lahaayeen nidaamka wax soosaarka dadka reer Somaliland.
Qaarkamida shaqaalaha fursada u helay tobabarkan ayaa iyaguna dhankooda ka waramay waxyaabaha ay ka faa,ideen mudadii tobabarkani socday ,waxaanay sheegen inay uga faa,idayn doonan dadka xoola dhaqatada ee deegaanka aburiin, Tobabarkan ayaa waxaa qabanaya khubaro ku xeel dheer arimaha beeraha
Dhamaadka tabobarkan ayaa waxa lafilayaa inay wax wayn iska badali doonaan aqoonta shaqaalaha tobabarkan qaadanaya iyo sidoo kale nidaamka wax soosaarka ee beeralayda Somaliland gaar ahaan deegaanka aburiin,si looga maarmo siidhka aan wax tarka lahayn ee laga keeno dalka dibadiisa
Shirkan oo lagu qabtay hotel maansoor ee magalada berbera aya waxa ka so qayb galay Wasiiru dawlaha Wasaaradda Biyaha ,Maamula ku xigeenka Mashruuca SDF , Maareeyaha mashruuca Biyo balaadhinta Berbera , Maareyaha wakaalada berbera
Ujeedada shirkan ayaa ahayd sidii qorshe loogu Samayn laha biyo balaadhinta magaalada berbera , ugu horeyna waxa shirka ka hadlay Maareeyaha mashruuca isago faahfaahin ka bixiyay u jeedada mashruuca looga dan leeyahay iyo sidi lagu balaadhin laha biyaha magaalada berbera
shirkan aya waxa si wada jir ah u Furay wasiir dawlaha wasaaradda biyaha , Gudoomiyaha Gobolka iyo maareeyaha wakaalada berbera
intii shirkan socday aya waxa lagu so bandhigay warbixino la xidhiidha sidii qorshe loogu samayn laha Biyo balaadhinta magaalada berbera
ugu danbayntiina waxa shirka soo xidhay Wasiirudawlaha Wasaaradda Biyaha ee Somaliland